Momba anay - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Anebon Metal Products Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia avo lenta ISO 9001: 2015, manana traikefa mihoatra ny folo taona manokana amin'ny famokarana sy ny famolavolana ny serivisy fametahana masinina sy vy.
Mba hahafahana mamaly ny fangatahan'ny mpanjifa dia nanatsara tsikelikely sy nampitombo ny fitaovana mandroso hafarana i Anebon. Hatreto dia misy mpiasa 80. Ny orinasa dia mandrakotra velaran-tany 5000 metatra toradroa, ary manana ekipa matihanina masiaka, manavao ary miray. Ny injenieranay dia efa nanao an'ity sehatra ity nandritra ny 10 taona mahery. Noho izany, afaka mihaona tanteraka amin'ny famolavolana ny vokatra, ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana ny mpanjifa izahay ary manao izay rehetra azonay atao mba hampihenana ny vidin'ny fampandrosoana, ny daty fandefasana ary ny loza mety hitranga amin'ny mpanjifa. Mba hahazoana antoka fa azo zahana ny tetikanao ary apetraka haingana any an-tsena.
Ny departemantan'ny varotra sy ny sampan-draharahan'ny kalitao dia handamina tsy tapaka handray anjara amin'ny fiofanana mba hahafahanay manome ny mpanjifa serivisy tsara kokoa sy antoka ara-kalitao. Amin'ny alàlan'ny ezaka ataonay. Nahazo laza tsara eo amin'ny sehatry ny serivisy CNC Machining sy Metal Stamping izahay. Mino foana izahay fa: "kalitao", "Fahombiazana" ary "Serivisy" dia fenitra lehibe handresena ny fanohanan'ny mpanjifa sy ny olona amin'ny fari-piainana rehetra.
Antony enina hisafidianana ANEBON
Ekipa matihanina manan-karena traikefa
Mifantoha amin'ny fanodinana alimina alimina alimina vita amin'ny alimina alimina ao amin'ny masinina, faritra misy ny milina ao amin'ny milina nandritra ny 10 taona mahery.
Fehezo tsara ny machining CNC, safidio ny fitaovana famokarana mety ho an'ny fanodinana vy samihafa. Ny fitaovana fanandramana mandroso dia afaka miantoka ny maha-marina ny vokatra namboarina tamin'ny milina CNC ary manamafy fa tsara ny entana alohan'ny fandefasana.
Serivisy haingana hamahana olana
Manana ny fahaizana mandrindra ireo sombin-fitaovana sarotra ao anaty andiany, ary mahavita am-pahombiazana tetikasa teknika avo lenta maromaro, ao anatin'izany ny faritra robotic, kojakoja fiara, sns. Ny mpiasa miasa amin'ny mpanjifa vokatra matihanina dia manampy ny mpanjifa amin'ny fisafidianana vokatra mety amin'ny masinin'izy ireo.
Kalitao avo, vidiny ambany
Azonao atao ny mankafy ny vidin'ny milina CNC ambany indrindra ambany kalitao mitovy, ary ny habetsahan'ny lamina milamina dia miantoka fa afaka mifehy ny vidiny hatramin'ny farany ambany indrindra izahay. Ny rafi-pamokarana matotra dia mamela ny mpanjifa hahatratra ny fividianana lafo vidy, ary ny ekipa teknika matihanina dia afaka mifehy ny fomba fanao amin'ny milina tsara indrindra ary tsy mandany fitaovana.
Tombanana ny daty fandefasana marina indrindra ho anao mba hahafahan'ny vokatrao manararaotra ny tsena! Ny fizotry ny famokarana mahaleo tena sy ny fitaterana haingana dia hamonjy fotoana anao. Mandà ny fisian'ny faharetan'ny kaomandy, ny fampanantenana dia ny fisian'ny lanjantsika.
Azontsika atao ny manonona teny nindramina tao anatin'ny 6 ora tamin'ny haingam-pandeha haingana indrindra, ny matihanina, ny fizotrany ary ny endrika mahazatra. Ny fanontaniana rehetra dia ho voavaly ao anatin'ny 24 ora.
IZA NO ATAONTSIKA